ရူေမာင္၏ဗ်ာဒိတ္အေၾကာင္း, ရှင်လုကာခရစ်ဝင်။ 2:25-35 – Simeon blesses Jesus, Luke 2:25-35 | Bibleview
မြန်မာ စာ – Myanmar » ယင်းစာအုပ် – Bible » » ဇစ်မြစ် ယေရှု ခရစ် – Birth of Jesus » ရူေမာင္၏ဗ်ာဒိတ္အေၾကာင္း, ရှင်လုကာခရစ်ဝင်။ 2:25-35 – Simeon blesses Jesus, Luke 2:25-35
ရူေမာင္၏ဗ်ာဒိတ္အေၾကာင္း, ရှင်လုကာခရစ်ဝင်။ 2:25-35 – Simeon blesses Jesus, Luke 2:25-35
Simeon,aprophet, wasavery old man who was told by God he would see Jesus before he died.
Simeon likealot of Jews were waiting for the arrival of the Messiah.
When Simeon saw Jesus he took Jesus in his arms and praised God see the reading below from verses 29-32 and verses 34-35.
In Hebrew Simeon means hearing or listening.
25Now there wasaman in Jerusalem called Simeon,
who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel,
and the Holy Spirit was upon him. 26 It had been revealed
to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord’s
Christ. 27 Moved by the Spirit, he went into the
temple courts. When the parents brought in the child Jesus to do for him
what the custom of the Law required, 28 Simeon took
him in his arms and praised God, saying:
31 which you have prepared in the sight of
33 The child’s father and mother marveled at what was
said about him. 34 Then Simeon blessed them and said
to Mary, his mother:
“This child is destined to cause the falling and rising
of many in Israel, and to beasign that will be spoken against, 35 so that the thoughts of many hearts will be revealed.
30-32 ကိုယ်တော်၏လူ ဣသရေလအမျိုးကို ချီးမြှောက်စေခြင်းငှါ၎င်း၊ တပါးအမျိုးသားတို့ကို လင်းစေခြင်း ငှါ၎င်း၊ လူအမျိုးမျိုးတို့ရှေ့မှောက်၌ ပြင်ဆင်တော်မူသောအလင်းတည်းဟူသော ကယ်တင်သောသခင်ကို အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်မျက်စိနှင့်မြင်ရပါ၏ဟု မြွက်ဆို၏။
ထိုစကားများကို ယောသပ်နှင့်မယ်တော်သည် ကြားလျှင် အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏။
The angel Gabriel spoke to Mary about the Birth of Jesus, ရှင်လုကာခရစ်ဝင်။ 1:26-38
ဘုရားသခင္၏ေကာင္းကင္တမန္ကာေဗလသည္ မာရိထံသို ့အလည္လာေရာက္ခဲ့သည္ (ရွင္လုကာခရစ္ဝင္က်မ္း ၁း၃၉-၄၀)
ဧလိရွဗက္သည္ သူမထံသို ့မာရိ အလည္လာေရာက္ျခင္းအခြင့္ ရရိွခဲ့သည္။ (ရွင္လုကာ ၁း၄၁-၄၅) – Elizabeth getsavisit from Mary, Luke 1:41-45
Mary Sings A Song Of Praise To God, ရှင်လုကာခရစ်ဝင်။ 1:46-56 –
An angel of the Lord appeared to Joseph inadream, ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်။ 1:18-25
Joseph and Mary, ရှင်လုကာခရစ်ဝင်။ 2:1-4
Mary traveled with Joseph onadonkey, ရှင်လုကာခရစ်ဝင်။ 2:4-5
Jesusanewly born Baby, ရှင်လုကာခရစ်ဝင်။ 2:6-7 and Matthew 1:18-25
Shepherds keeping watch, ရှင်လုကာခရစ်ဝင်။ 2:8-12 and 15-20
Angels Praised God for the Birth of Jesus, ရှင်လုကာခရစ်ဝင်။ 2:13-14
Jesus at 40 days old was taken to the Temple, ရှင်လုကာခရစ်ဝင်။ 2:22-24
ပေရာဖတ္ အႏၷ အေၾကာင္း, ရှင်လုကာခရစ်ဝင်။ 2:36-38 – Anna the prophetess, Luke 2:36-38
Magi, traveled from the east to find Jesus, ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်။ 2:1-2 –
Herod getsavisit from the Magi, ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်။ 2:3-8 –
Magi follow the star, ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်။ 2:9-10 –
Jesus asayoung child, ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်။ 2:11-12
Joseph takes Jesus and Escapes to Egypt, ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်။ 2:13-15
Herod the Great – First Plot to kill Jesus, ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်။ 2:16-18
နာဇရက္ရြာသိုျပန္လာျခင္း, ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်။ 2:19-23
Jesus about twelve years old, ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်။ 2:41-52
The Cross still to come see Luke and Matthew –